बाबुरामको प्रश्न: के बानरहरु पुच्छर काटेकै भरमा मान्छे भएका हुन् ? - USNEPALNEWS.COM
बाबुरामको प्रश्न: के बानरहरु पुच्छर काटेकै भरमा मान्छे भएका हुन् ?
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले आजैका दिन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विलयको घोषणाको अर्थ के भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
एमालेका तत्कालिन महासचिव मदन भण्डारी र नेता जीवराज आश्रितको २५ औं स्मृति दिवसका अवसरमा दुवै पार्टीबीच एकता घोषणाको तयारी भइरहँदा डा. भट्टराईले ट्विटरमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
त्यसअघि उनले बुधबार साँझ यसै विषयमा ट्विट गर्दै भनेका थिए, ‘एमाले–माके एकता अन्ततः सम्पन्न हुन लागेकोमा दुवैलाई बधाई÷शुभकामना । तर केही अनुत्तरित प्रश्न : के बानरहरु पुच्छर काटेकै भरमा मान्छे भएका हुन् ? गणितमा माइनस एक र माइनस एक जोड्दा माइनस दुई हुन्छ । माइनस एकको मूल्य धेरै कि माइनस दुईको ? सर्वहारा अधिनायकत्व छोडेपछि कम्युनिस्ट नाममा मोह किन ?